Glazov Ubunikazi Bebhizinisi - Umagazini Design
Ubunikazi Bebhizinisi IGlazov ifektri yefenisha edolobheni elinegama elifanayo. Ifektri ikhiqiza ifenisha engabizi. Njengoba ukuklanywa kwefenisha enjalo kuhlukile, kwathathwa isinqumo sokusekela umqondo wokuxhumana ezinhlotsheni zokuqala "zokhuni" ze-3D, amagama ahlanganiswe yilezo zinhlamvu afanekisela isethi sefenisha. Izincwadi zakha amagama athi "ifenisha", "igumbi lokulala" njll noma amagama amaqoqo, abekwe ngendlela ukuze afane nezicucu zefenisha. Izinhlamvu ezibhalwe phansi ze-3D ziyafana nezinhlelo zefenisha futhi zingasetshenziswa ezintweni zokubhala noma ngaphezulu kwezithombe zokukhonjwa komkhiqizo.
Igama lephrojekthi : Glazov, Igama labaklami : Mikhail Puzakov, Igama leklayenti : Glazov furniture factory.
Ubunikazi Bebhizinisi Mikhail Puzakov Glazov